Baardheere:Sarkaal kasoo goostay Maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu soo bandhigay – idalenews.com
Baardheere:Sarkaal kasoo goostay Maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu soo bandhigay
-12kii Bishan November ayay ahayd markii uu isku soo dhiibay Cabdinuur Macalin Xasan oo ka mid ahaa horjoogayaasha Maleeshiyaadka Al-Shabaab Ciidamada Nabad Sugidda Dowlad Gobaleedka Jubaland iyo Saraakiisha Guutada 10-aad ee Ciidamada Xoogga Dalka ee Gobalka Gedo.
Saraakiisha Ciidamada Xoogga Dalka iyo Saraakiisha Ciidamada Nabad sugida Dowlad Gobaleedka Jubaland ee Degmada Baardheere ayaa maanta warbaahinta usoo bandhigay Cabdinuur Macalin Xasan oo dhawaan isku soo dhiibay Dowlada Soomaaliya.
Cabdinuur Macalin Xasan ayaa ka mid ahaa Saraakiishii Kooxda Nabadiidka ee u qaabilsanaa Deegaanada Gobalka Gedo balse markii Dambe ka howlgali jiray Deegaanada Koofur galbeed Soomaaliya.
Taliye ku-xigeenka Nabad sugida Jubaland ee Baardheere Axmed Maxamed Cabdulaahi Garab Gooye oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay wali furan tahay cafiskii Madaxweynaha Jamhuuriyada Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee uu u fidiyay Dhalinyarada laqalday ee wali ka tirsan Kooxda Al-Shabaab.
Cabdinuur Macalin Xasan waxaa uu dhankiisa sheegay in uu ka tanaasulay fikirkii Gumaadka Umada Soomaaliyeed ee Al-Shabaab, isla markaana uu ka shaqayn doono hormarka Dalkiisa hooyo sidoo kale waxa uu baaq u diray dhalinyarada la qalday ee Al-Shabaab, isagoo u sheegay inay kasoo laabtaan fikirka ku saleysan gumaadka Ummadooda Soomaaliyeed.
Dalka Benin: Shir ay isugu yimaadeen in ka badan 26 Dal oo ka tirsan Dowladaha Islaanka (OIC)
Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta 19 Feb, 2018 waxaa uu furay Shir lagaga hadlayo dardar